စားသုံးသူတှေ ကိုယျ့စီက ဝယျယူရခွငျး အကွောငျးရငျး (၅) ခကျြ | မာသငျ
စားသုံးသူတှေ ကိုယျ့စီက ဝယျယူရခွငျး အကွောငျးရငျး (၅) ခကျြ
၁။ ကွောကျရှံစိုးရိမျခွငျး (Fear)
၂။ လောဘ (Greed)
၃။ ခဈြခွငျးမတ်ေတာ (Love )
၄။ ဂုဏျမာန (Pride)
၅။ အပွဈစှဲစိတျ (Guilt)
စိုးရိမျကွောငျ့ကွမှု ဆိုတာ လူတှကေို အမြားဆုံး ဝယျယူမှု ဖွဈစတေဲ့အရာပါပဲ။
ဆိုရှယျမီဒီယာတှေ၊အငျတာနကျတှကွေောငျ့ သတငျးတဈခု ဆိုတာ ယနခေ့တျေမှာ အငျမတနျမှ ပွနျ့နှံ့လှယျပါတယျ။
ပစ်စညျးတှပွေတျလပျသှားမှာ စိုးလို့ ဆိုတဲ့ စိုးရိမျကွောငျ့ကွမှုဟာ ဈေးဝယျစငျတာတှရှေေ့ မှာ သှေးပကျြနကွေတဲ့ လူအုပျကွီးတဈခုကို ဖနျတီးပေးနိုငျပါတယျ။
အလိမျခံရတဲ့ ဝယျယူမှုတျောတျောမြားမြားက လောဘပျေါမှာ အခွခေံလရှေိ့ပါတယျ။
နောငျတဈခြိနျ ဈေးတကျလာနိုငျတယျဆိုတဲ့ အတှေးသေးသေးမှားမှားလေးတဈခုက ကိုယျ့ကိုတနျဖိုး ကွီးမားတဲ့ အိမျခွံမွဝေယျယူမှု တဈခုကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပွီး၊ နောငျတဈခြိနျဆိုတာ မသခြောမရရောတဲ့ ဖွဈနိုငျခြေ အုတျမွဈပျေါမှာအခွခေံထားတယျဆိုတာ သိလိုကျရခြိနျမှာ နောကျကသြှားခဲ့ပါပွီ။
ခဈြခွငျးမတ်ေတာ ဆိုတာ သမိုငျးမှာ စဈပှဲတှကေိုတောငျ ဖွဈစနေိုငျခဲ့တာပဲ။
ထရိုဂနျြစဈပှဲ၊ ကယျလီယိုပထရာ၊ ပနျထှာရှငျမ၊ ရာမနှငျ့ လက်ခဏာ၊ ဝဠေုဝတီ၊ စုက်ကတေးနှငျ့ အနျောရထာ စတဲ့ သမိုငျးကွောငျးတှကေ ခဈြခွငျးမတ်ေတာဆိုတာ ကွီးမားတဲ့ တှနျးအားတဈခု (သို့) စှမျးအားတဈခု ဆိုတာ သကျသပေဲဖွဈပါတယျ။
ကိုယျ့လုပျငနျးရဲ့အရောငျးသမားတိုငျးက “စှမျးအားရှငျ” အရောငျးသမားဖွဈနဖေို့ဆိုတာ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို လကျကိုငျထားဖို့လိုပါတယျ။ ဆိုလိုတာက စားသုံးသူကို ခဈြကွောငျး၊ အကြိုးလိုလာကွောငျးကို ကိုယျအမူအရာ၊နုတျအမူအရာ၊နှလုံးအမူအရာအားဖွငျ့ ပွသနိုငျရပါမယျ။
ကွျောငွာတှလေဲ စှမျးအားရှငျကွျောငွာဖွဈစဖေို့ PR သုံးရပါမယျ။
အမှနျတော့ ကွျောငွာတှဆေိုတာ တဈဘကျသကျဆနျပါတယျ။ ကိုယျ့ကောငျးကွောငျးခညျြ့ပဲပွောခွငျးကို ကွျောငွာလို့ချေါတာလေ။
PR လို့ ချေါတဲ့ Public Relations ဆိုတာက နှဈဘကျအကြိုးကို ကွညျ့ပါတယျ။ Relationship ဆိုတာ နှဈဘကျအကြိုးကို ကွညျ့ရာကဖွဈပျေါလာတာပါ။ ကွျောငွာမလား၊ PR မလား စဉျးစားပါ။
ကုနျပစ်စညျးတဈခု ရဲ့ဂုဏျဆိုတာ Branding ဘရနျးဖွဈပါတယျ။
ကုနျပစ်စညျး အရညျအသှေးတူခငျြတူပါမယျ၊ ဘရနျးမတူရငျ ဂုဏျမတူပါဘူး။
ဝနျဆောငျမှုခွငျး တူခငျြတူပါမယျ၊ ဘရနျးမတူရငျ ဂုဏျမတူပါဘူး။
အဆုံးမှာ တော့ ကုနျပစ်စညျးကို ဝယျယူခွငျးဆိုတာထကျ ဂုဏျတဈခုကို ဝယျယူခွငျးဖွဈပါလိမျ့မယျ။
သငျ့လုပျငနျးက ဘယျလို ဂုဏျမြိုးပေးသလဲ ဆိုတာကတော့ သငျ့ရဲ့ဘရနျး (Brand) ဆုံးဖွတျခကျြပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ဈေးဝယျစငျတာသှားရငျးနဲ့နမူနာကြှေးတာလေးစားမိလို့ကိုယျ့အတှကျ မလိုအပျပဲ ဝယျမိတာ ရှိကောငျးရှိပါလိမျ့မယျ။
ဈေးခြိုညဈေးတနျးမှာ “ရမလားလို့ဈေးစဈကွညျ့လိုကျတာ” လြော့ပေးလိုကျတော့ အားနာလို့ဝယျမိလိုကျတာရှိကောငျးရှိမယျ။
ကိုယျ့မိတျဆှဆေိုငျမို့လို့ဝငျကွညျ့တာ အားနာလို့ကိုယျ့အတှကျ မလိုအပျပဲ ဝယျကောငျးဝယျမိတာရှိခငျြရှိမယျ။
အရငျတဈခါ သူလဖကျရညျတိုကျထားလို့ဒီတဈခါ ကိုယျရှငျးဖို့ဖွဈလာတယျ။
အရငျတဈခါ ကိုယျ့မင်ျဂလာဆောငျလာထားလို့ဒီတဈခါ သူ့မင်ျဂလာဆောငျကိုယျသှားဖို့ဖွဈလာတယျ။
ကိုယျ့မှေးနေ့ သူ လကျဆောငျပေးထားလို့၊ သူ့မှေးနကေို့ယျမပေးရငျ အားနာစရာကွီး။
အားနာတယျဆိုတာ အပွဈစှဲစိတျ ကနေ ဖွဈပျေါလာတာပဲဖွဈပါတယျ။
စီးပှားရေးလုပျငနျးတိုငျး၊ အရောငျးသမားတိုငျး က ဒီ ဝယျယူခွငျးဆိုငျရာ အကွောငျး (၅) ခကျြကို သိဖို့လိုအပျတယျ။
အကွောငျးထှားအောငျ ပြိုးထောငျ ခွငျးအားဖွငျ့ အကြိုးမြား စညျပငျဝပွောတိုးတကျလာမှာဖွဈပါကွောငျး….
ကြှနျတျော မာသငျ မြှဝအေပျပါသညျခငျဗြာ။ ။
စားသုံးသူတွေ ကိုယ့်စီက ဝယ်ယူရခြင်း အကြောင်းရင်း (၅) ချက်
၁။ ကြောက်ရွံစိုးရိမ်ခြင်း (Fear)
၂။ လောဘ (Greed)
၃။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (Love )
၄။ ဂုဏ်မာန (Pride)
၅။ အပြစ်စွဲစိတ် (Guilt)
စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ဆိုတာ လူတွေကို အများဆုံး ဝယ်ယူမှု ဖြစ်စေတဲ့အရာပါပဲ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ၊အင်တာနက်တွေကြောင့် သတင်းတစ်ခု ဆိုတာ ယနေ့ခေတ်မှာ အင်မတန်မှ ပြန့်နှံ့လွယ်ပါတယ်။
ပစ္စည်းတွေပြတ်လပ်သွားမှာ စိုးလို့ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုဟာ ဈေးဝယ်စင်တာတွေရှေ့ မှာ သွေးပျက်နေကြတဲ့ လူအုပ်ကြီးတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
အလိမ်ခံရတဲ့ ဝယ်ယူမှုတော်တော်များများက လောဘပေါ်မှာ အခြေခံလေ့ရှိပါတယ်။
နောင်တစ်ချိန် ဈေးတက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးသေးသေးမွှားမွှားလေးတစ်ခုက ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုး ကြီးမားတဲ့ အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူမှု တစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး၊ နောင်တစ်ချိန်ဆိုတာ မသေချာမရေရာတဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေ အုတ်မြစ်ပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရချိန်မှာ နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဆိုတာ သမိုင်းမှာ စစ်ပွဲတွေကိုတောင် ဖြစ်စေနိုင်ခဲ့တာပဲ။
ထရိုဂျန်စစ်ပွဲ၊ ကယ်လီယိုပထရာ၊ ပန်ထွာရှင်မ၊ ရာမနှင့် လက္ခဏာ၊ ဝေဠုဝတီ၊ စုက္ကတေးနှင့် အနော်ရထာ စတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေက ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ ကြီးမားတဲ့ တွန်းအားတစ်ခု (သို့) စွမ်းအားတစ်ခု ဆိုတာ သက်သေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့အရောင်းသမားတိုင်းက “စွမ်းအားရှင်” အရောင်းသမားဖြစ်နေဖို့ဆိုတာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လက်ကိုင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စားသုံးသူကို ချစ်ကြောင်း၊ အကျိုးလိုလာကြောင်းကို ကိုယ်အမူအရာ၊နုတ်အမူအရာ၊နှလုံးအမူအရာအားဖြင့် ပြသနိုင်ရပါမယ်။
ကြော်ငြာတွေလဲ စွမ်းအားရှင်ကြော်ငြာဖြစ်စေဖို့ PR သုံးရပါမယ်။
အမှန်တော့ ကြော်ငြာတွေဆိုတာ တစ်ဘက်သက်ဆန်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကောင်းကြောင်းချည့်ပဲပြောခြင်းကို ကြော်ငြာလို့ခေါ်တာလေ။
PR လို့ ခေါ်တဲ့ Public Relations ဆိုတာက နှစ်ဘက်အကျိုးကို ကြည့်ပါတယ်။ Relationship ဆိုတာ နှစ်ဘက်အကျိုးကို ကြည့်ရာကဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ကြော်ငြာမလား၊ PR မလား စဉ်းစားပါ။
ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု ရဲ့ဂုဏ်ဆိုတာ Branding ဘရန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေးတူချင်တူပါမယ်၊ ဘရန်းမတူရင် ဂုဏ်မတူပါဘူး။
ဝန်ဆောင်မှုခြင်း တူချင်တူပါမယ်၊ ဘရန်းမတူရင် ဂုဏ်မတူပါဘူး။
အဆုံးမှာ တော့ ကုန်ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူခြင်းဆိုတာထက် ဂုဏ်တစ်ခုကို ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်လုပ်ငန်းက ဘယ်လို ဂုဏ်မျိုးပေးသလဲ ဆိုတာကတော့ သင့်ရဲ့ဘရန်း (Brand) ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဈေးဝယ်စင်တာသွားရင်းနဲ့နမူနာကျွေးတာလေးစားမိလို့ကိုယ့်အတွက် မလိုအပ်ပဲ ဝယ်မိတာ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။
ဈေးချိုညဈေးတန်းမှာ “ရမလားလို့ဈေးစစ်ကြည့်လိုက်တာ” လျော့ပေးလိုက်တော့ အားနာလို့ဝယ်မိလိုက်တာရှိကောင်းရှိမယ်။
ကိုယ့်မိတ်ဆွေဆိုင်မို့လို့ဝင်ကြည့်တာ အားနာလို့ကိုယ့်အတွက် မလိုအပ်ပဲ ဝယ်ကောင်းဝယ်မိတာရှိချင်ရှိမယ်။
အရင်တစ်ခါ သူလဖက်ရည်တိုက်ထားလို့ဒီတစ်ခါ ကိုယ်ရှင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်။
အရင်တစ်ခါ ကိုယ့်မင်္ဂလာဆောင်လာထားလို့ဒီတစ်ခါ သူ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုယ်သွားဖို့ဖြစ်လာတယ်။
ကိုယ့်မွေးနေ့ သူ လက်ဆောင်ပေးထားလို့၊ သူ့မွေးနေ့ကိုယ်မပေးရင် အားနာစရာကြီး။
အားနာတယ်ဆိုတာ အပြစ်စွဲစိတ် ကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်း၊ အရောင်းသမားတိုင်း က ဒီ ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်း (၅) ချက်ကို သိဖို့လိုအပ်တယ်။
အကြောင်းထွားအောင် ပျိုးထောင် ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးများ စည်ပင်ဝပြောတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါကြောင်း….
ကျွန်တော် မာသင် မျှဝေအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။ ။